Ungayenza kanjani i-SEO Yendawo Ephumelelayo Kubhajethi | Martech Zone
Ungayenza kanjani i-SEO yendawo ephumelelayo kusabelomali
NgeSonto, ngoJuni 23, i-2013 NgeSonto, ngoJuni 23, i-2013 I-Jayson DeMers
Ngokuhamba kwesikhathi, i-SEO isiba lukhuni futhi inzima ngokwengeziwe, kepha ngabe lokho kufanele ukuthi kusho ukuthi kubiza kakhulu? Akuzona zonke izinkampani ezidinga izinsizakalo ze-SEO ezisuselwa ku-inthanethi noma ezihlobene ne-IT. Eqinisweni, iningi lincane, amabhizinisi endawo asebenzela indawo ethile. Laba bantu badinga SEO yendawo esikhundleni sendabuko, i-SEO kazwelonke.
Amabhizinisi endawo nabantu ngabanye - odokotela bamazinyo, abasebenza ngamapayipi amanzi, izitolo zezingubo, izitolo ezisebenza ngogesi — abanaso isidingo esiphuthumayo sokubeka ezingeni eliphezulu ekuseshweni komhlaba wonke ukuheha amaklayenti avela kolunye uhlangothi lomhlaba, noma aphume ezweni lawo. Badinga ukuphuma phambili kuphela uma othile ebheka "odokotela bamazinyo eSeattle" noma "abasebenza ngamapayipi aseMadison." Yilapho i-SEO yendawo ingena khona.
"Odokotela bamazinyo seattle wa" ubuyisela i-7-pack yamawebhusayithi asuselwa endaweni
Kuningi okube khona kubhalwe nge-SEO yendawo nokubaluleka kwayo emakethe eqhutshwa usesho lwe-Google. Ngeshwa, ababaningi abantu abaqaphela ukuthi i-SEO yendawo empeleni ingenziwa ngezindleko eziphansi kakhulu; futhi ukusetshenziswa kwemali okuncane okutshalwe ku-SEO yendawo kungashintsha i-ROI enkulu.
I-SEO yasendaweni kufanele ibize kancane kunokugaya okujwayelekile kwamaphakeji we-SEO izinkampani ezivame ukuthengisa. Nakhu ukuthi kungani:
1. Umncintiswano omncane
Ngephakeji le-SEO lomhlaba wonke / likazwelonke, kusobala ukuthi uncintisana nezinkulungwane zamanye amawebhusayithi (uma kungenjalo) avutha kubhajethi enkulu ukuthola amazinga aphezulu. Uma kukhulunywa nge-SEO yendawo, umncintiswano wehliswa khona manjalo waba yizinhlangano kanye namawebhusayithi. Lokhu kungenxa yokuthi amagama angukhiye owakhombayo aba “ngokuqondene nendawo,” okuyinzuzo enkulu (sibonga ngokwengxenye ubuhlakani beGoogle).
Esikhundleni sokuqhudelana namawebhusayithi ezweni lonke noma umhlaba wonke, manje usuxabene nedlanzana lamabhizinisi endawo. Amathuba amahle ukuthi ababaningi babo abake baba nosizo lobuchwepheshe be-SEO, beshiya umnyango uvulekile kuwe ukuze uthathe imiphumela yosesho.
2. Ukukhishwa kwegama elingukhiye elilula
Nge-SEO yendawo, ukugxila kuvuliwe amagama angukhiye we-longtail namagama angukhiye aqondene ne-geo. Esikhundleni sokuzama ukukala amagama angukhiye athi “odokotela bamazinyo,” nge-SEO yendawo uzobe ukhomba "odokotela bamazinyo eSeattle," okuguqula konke ukulingana komqhudelwano nokubhekiswa kwegama elingukhiye. Ngamagama angukhiye we-longtail nama-geo aqondisiwe, ukuncintisana kwamagama asemqoka kuncishiswe kakhulu, okwenza kube lula ukuncintisana nokufeza amazinga aphezulu.
3. Ukuguqulwa okungcono
Umbiko weMicrosoft ngo-2010 wathi abasebenzisi be-smartphone banamathuba amaningi okuguqula ngokushesha. Kulo nyaka, uNielsen ubike ukuthi cishe u-64% wokuseshwa kwama-smartphone restaurant kuguqulwe kungakapheli ihora. Iphuzu elibalulekile lapha ukuthi konke lokho bekungukusesha kwendawo kohlu lwasendaweni. Amabhizinisi endawo athola amazinga wokuguqulwa angcono ngemiphumela yosesho lwendawo. Lokhu akusebenzi nje kuphela ku-ecosystem ye-smartphone kepha kuwo wonke amadivayisi abantu abawasebenzisayo ukusesha ku-Google ukuthola uhlu lwamabhizinisi endawo.
Into eyodwa ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi ukuguqulwa kuboniswe ukuthi kwehla kakhulu lapho amakhasi elayisha kancane; abasebenzisi beselula abanaso isineke esincane sokulinda ukuthi amawebhusayithi alayishwe. I-CDN (inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe) ukusingathwa kunikeza isisombululo esihle kakhulu sokuqeda amakhasi alayishwa kancane nokwenza ngcono amazinga wokuguqulwa.
4. Ukulungiselela Okuncane
Ngokungafani ne-SEO yendabuko, i-SEO yasendaweni iphathelene nalokho okubizwa kakhulu ngokuthi “izingcaphuno” - ukubalulwa okungeyona isixhumanisi kwegama lakho lomkhiqizo, ikheli, nenombolo yocingo, izibonelo zazo ezibandakanya ukufakwa kuhlu kuzikhombisi-ndlela nokuthola izibuyekezo ezinhle. Ukufaka amasu ambalwa wendabuko we-SEO njengebhulogi kanye nezixhumanisi eziningi zekhwalithi ezivela kumawebhusayithi endawo asungulwe ngokuqinisekile kuyasiza, kepha lokhu kuyikhekhe lekhekhe. Ukwenza kahle kakhulu - ekhasini nekhasi elingekho - kulula nge-SEO yendawo uma iqhathaniswa ne-SEO yendabuko.
5. Izixazululo Ezikulungele
Yilapho kuba ngcono nakakhulu. Njengezinsizakalo zendabuko ze-SEO, lapho uchwepheshe engathola khona amathuluzi nezinsiza ezahlukahlukene zokuphatha inqubo ngempumelelo, kunezinsizakalo ezifana Isitholi Sokucaphuna seWhitespark, Yext (eyenza futhi ilawule izingcaphuno kunqwaba yezinkomba), namanye amathuluzi amaningi okusiza imizamo ye-SEO yasendaweni.
Njengoba izinkampani eziningi ze-SEO zisebenzisa lezi zinsizakalo ezithandwayo, eziphumelelayo nezihlolwa isikhathi, isikhathi sokutshalwa kwemali esidingekayo ukufeza imiphumela sincane kakhulu kune-SEO yendabuko.
6. Imiphumela Esheshayo
Imiphumela ye-SEO ayinakuqinisekiswa, kepha ababukeli abaningi bayavuma ukuthi imizamo ye-SEO yendawo ithola imiphumela esheshayo. Kuyathakazelisa ukuthi awekho amawebhusayithi amaningi (namabhizinisi abo) aqonda inzuzo yokuthola imiphumela esheshayo yemizamo yabo ye-SEO: lokhu kusho ngempumelelo ukusetshenziswa kwemali okuncane, ngoba isikhathi siyimali.
Izinkampani eziningi ezijwayelekile ze-SEO ziyaqhubeka nezinqubo zokusebenzisa kuze kube zithole imiphumela ethembekile yokukhombisa amaklayenti azo. Ekugcineni, bakhokhisa iklayenti okuningi kakhulu kunalokho obekufanele kukuthathe ukufeza leyo miphumela. Ngezinga elikhulu, lokhu kungagwenywa nge-SEO yendawo.
7. Izinqubo ze-ROI nezinqubo eziqhubekayo
Ngokungafani ne-SEO yendabuko, i-SEO yendawo ine-ROI ephezulu kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi amabhizinisi amaningi endawo angabahlinzeki bezinsizakalo zomzimba, futhi abantu abafuna izinsizakalo edolobheni elithile banamathuba amaningi okuthi baphenduke amakhasimende ngokushesha. Ngokuncintisana okuncane (ezimweni eziningi), amathuba angcono okufakwa kuhlu ku-Google nakwezinye izinjini zokusesha, kanye newebhusayithi eyenziwe kahle, amabhizinisi endawo angasebenzisa kalula isici se- “trust”.
I-SEO yasendaweni ayilahlekile ngamathuba wokusebenzisa ngemuva. Umuntu udinga ukugcina iso njalo kwizinga, ukukhulisa, nokuphinda izinqubo ezithile, kepha lezi zivame ukuba namandla kakhulu futhi zilinganiselwe kunalokho okudingekayo nge-SEO yendabuko.
Izinsiza Zamahhala noma ezingabizi ze-SEO Yasendaweni
1. Ithuluzi Legama elingukhiye le-Google Adwords
Kungahle kube namathuluzi wegama elingukhiye angcono, anezici eziningi, kepha ngazo zonke izinhloso ezisebenzayo, ezakwaGoogle Ithuluzi elingukhiye uphendula izidingo ezibaluleke kakhulu zocwaningo lwegama elingukhiye. Ithuluzi lisebenza ngezindlela eziningi futhi lihle kakhulu uma ufuna ukuncintisana okususelwa endaweni nedatha yevolumu yokusesha.
2. Uhla lwemikhombandlela namawebhusayithi
Kunamakhulu ezinkomba lapho ungathola khona “izingcaphuno,” okuyisici esibalulekile ekubekweni kwamagama asemqoka aqondene nendawo. Ngasekupheleni konyaka odlule, uMales wahlanganisa enkulu uhlu lwemithombo yengcaphuno yamabhizinisi ase-US nase-UK. Iningi lalo lisaphethe okuhle.
Khumbula i-SEO trinity yendawo: Izindawo zeGoogle, i-Bing Local, ne-Yahoo! Okwasendaweni. Yenza iwebhusayithi yakho nebhizinisi lakho lifakwe kuhlu ngemininingwane ephelele kulokhu ngakunye kwalokhu. Ngemuva kwalokho engeza imithombo yengcaphuno kuresiphi yakho futhi usethwe kakhulu.
3. Kwezingcaphuno nezibuyekezo
Ukuhlolwa kwe-Google kwezingcaphuno kube yinsika yokuthola amazinga aphezulu. Kodwa-ke, ukubuyekezwa kudlala indima ebalulekile futhi. Amawebhusayithi afana Yelp zithandwa ngokususelwa kunqubo yokubuyekeza. Imiphumela eminingi yamagama asemqoka aqondene nendawo avela kuhlu lwamabhizinisi endawo lwe-Yelp anokubuyekezwa okukhulu.
“Isihlalo samazinyo” - Bheka umphumela wokuqala. Kuvela kuYelp.
I-Google ihlakaniphe kakhulu. Ayigcini ngokufunda izingcaphuno kepha futhi iyazi ukuthi kufundwa kanjani ukubalwa kokubuyekezwa. Ukubuyekezwa okuningi, ngcono ithuba lakho lokuvela phezulu.
Ukuthola izibuyekezo akunzima uma uthatha isikhathi ukucela amakhasimende akho adlule nawamanje, abangani, ngisho nomndeni wakho ukuthi ubuyekeze uhlu lwakho lwebhizinisi (kumawebhusayithi amaningi ngangokunokwenzeka). Kepha-ke, awufuni ukwenza ngokweqile lokhu.
4. I-On-page Optimization
Cishe wonke umuntu usho lokhu: Uma ibhizinisi lakho linekheli lendawo, lifake kuwo wonke amakhasi ewebhusayithi yakho (okungcono kunyaweni). Yenza ikheli olisebenzisayo lihambisane kuwo wonke amawebhusayithi nezikhombisi-ndlela obhale kuzo. Izinombolo zocingo nazo zibalulekile. I-Yext.com ilungele ukuqinisekisa ukungaguquguquki kuzo zonke izinkomba.
I-5. I-Social Media
Ukungeza umthamo ophilile wokuzibandakanya kwabezindaba zenhlalo kungenye yezinto ezinhle kakhulu ongazenzela imizamo yakho ye-SEO yangakini. Imithombo yezokuxhumana iya ngokuya iphenduka imbangi enamandla yazo zombili i-SEO kanye nokumaketha, ngakho-ke ukufaka lokhu kukereshi yakho ye-SEO yangakini kungumbono omuhle.
Uma ibhizinisi lakho lithembela kakhulu kumakhasimende endawo, i-SEO yendawo ithikithi lakho kumthamo wewebhusayithi ophakeme nokubonakala kuGoogle. Izindleko akufanele zibe yisithiyo ekusebenziseni imizamo yakho yokuthola amazinga aphezulu ku-Google - okungaba umthombo wakho oyinhloko wamakhasimende amasha nebhizinisi eliningi.
Tags: ukusesha kwendawoseo sendawoukusebenzisa ngokugcwele injini
UJayson DeMers ungumsunguli ne-CEO ye I-imeyiliUkuhlaziywa, ithuluzi lokukhiqiza elixhuma ku-akhawunti yakho ye-Gmail noma ye-G Suite futhi libukise umsebenzi wakho we-imeyili - noma owabasebenzi bakho. Mlandele Twitter or LinkedIn.
Izinqamuleli Namapharamitha Wosesho lwe-Google
Ukubheka Ikusasa Ledijithali Lokuthengisa Komhlaba
UJun 24, 2013 ngo-6: 41 AM
Ukhombise i-seo yendawo njengendlela engcono futhi engabizi. Siyabonga ngokwabelana….
Jun 24, 2013 ku-7: 26 PM
Okuthunyelwe okumnandi, uJayson!
Jun 25, 2013 ku-12: 17 PM
Jun 27, 2013 ku-8: 47 PM
Ngicabanga ngobuqotho ukuthi bonke osomabhizinisi abancane kufanele batshale imali kuhlu lwasendaweni, kunamathuluzi amaningi we-seo ongawasebenzisa noma ungakhipha ukukhangisa kwakho kwe-seo lena indlela enhle yokwenza ukubonakala ku-inthanethi
Aug 27, 2013 ku-7: 42 AM
Lokhu kuzosiza kakhulu ukwenza imisebenzi ye-seo
Okthoba 7, 2013 ngo-7: 58 AM
Ngicabanga ukuthi i-SEO ne-Social Media Service yingxenye ebalulekile ye-Digital Marketing. Kuwo wonke amaBhizinisi sidinga izinsizakalo ezinjalo zokufaka uphawu lomkhiqizo nokuphromotha. Ukufakwa kuhlu kwasendaweni kwe-Google nakho kuyingxenye ebalulekile yokumaketha kwasendaweni.
Ikati Web Design
Dec 14, 2013 ku-5: 08 AM
Enye yezindlela ezinhle kakhulu ze-seo yendawo ukuxhumana nomphakathi wasendaweni noma yimuphi umsebenzi.
Dec 2, 2015 ngo-1: 47 PM
Ibhulogi enhle yokuthi "ungayenza kanjani i-SEO yendawo esebenzayo kwisabelomali". Ngithole lawa macebiso abaluleke kakhulu ukusiza ukukhulisa ibhizinisi lami lendawo ngisebenzisa i-SEO. Ngiyabona futhi! 🙂